HIBRU 13 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (HI 13)
Hụrịtaanụ onwe unu nꞌanya, nꞌihi na unu bụ otu nꞌime Kraịst.
Unu echefula ịnabata ndị ọbịa, nꞌihi na ụfọdụ ndị mere nke a lekọtara ndị mmụọ ozi ma ha amataghị na ọ bụ ndị mmụọ ozi ka ha lekọtara.
Chetanụ ndị nọ nꞌụlọ mkpọrọ dị ka a ga-asị na unu so ha nọdụ nꞌụlọ mkpọrọ. Sorokwanụ ndị a na-emegbu nwekọọ ahụhụ dị ka a ga-asị na ọ bụ unu ka a na-emegbu.
Unu abụla ndị na-achọbiga ego oke ghọọ ndị na-efe ego. Ka afọ ju unu nꞌihe unu nwere. Nꞌihi na Chineke ṅụrụ iyi sị, “Agaghị m ahapụ gị. O nwekwaghị mgbe m ga-eji gbaketa gị azụ.”
Ya mere anyị pụrụ iji nganga na-atụghị egwu kwuo sị, “Chineke bụ onye inye aka m. Agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”
Jisọs Kraịst adịghị agbanwe agbanwe. Ihe ọ bụ ụnyaahụ ka ọ bụkwa taa. Nke a ka ọ ga-abụkwa ruo mgbe ebighị ebi.
Anyị nwere ebe ịchụ aja, ebe ndị nile na-eje ozi ha nꞌụlọ nzute ndị Juu na-enweghị ike iri aja a chụrụ nꞌelu ya.
Dị ka iwu ndị Juu si dị, onyeisi nchụaja na-eji ọbara anụ e gburu egbu baa nꞌime ime ụlọ ikwu ahụ ịchụ aja nꞌihi mmehie. Emechaa, a na-esite nꞌime obodo wepụ ahụ anụ ndị a e gburu kpọọ ha ọkụ nꞌezi.
Ọ bụ nke a mere Jisọs ji nwụọkwa, ma ọ bụghị nꞌime obodo. Ebe ahụ ka ọbara ya sachapụrụ mmehie anyị.
Ya mere, ka anyị si nꞌime obodo pụọ, ka anyị pụkwuru Kraịst nꞌazụ obodo, sorokwa ya nwekọọ ihe ihere.
Nꞌihi na ụwa abụghị ụlọ anyị, anyị na-ele anya ụlọ ebighị ebi anyị dị nꞌeluigwe.
Site nꞌinye aka Jisọs, anyị ga-anọgide na-achụrụ Chineke aja otuto. Anyị ga-eto ya site nꞌịgwa ndị ọzọ ihe banyere ebube aha ya.
Unu echefula iyikwasị onwe unu ịma mma dị ka uwe. Meekwanụ ka ndị nile chọrọ inye aka unu soro unu nwekọọ ihe unu nwere. Nke a bụ ụdị aja na-atọ Chineke ụtọ.
Kpeerenụ anyị ekpere nꞌihi na akọnuche anyị amaghị anyị ikpe. Anyị chọkwara ibi ndụ anyị nꞌime nkwanye ugwu nꞌihe nile.
Eji m nwayọọ na-arịọ unu ka unu kpeere m ekpere, ka m nwee ike ịlọghachikwute unu ọsịịsọ.
Ugbu a ka Chineke ahụ na-enye udo, Chineke ahụ sitere nꞌọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi ahụ kpọghachite Onyenwe anyị Jisọs Onye ọzụzụ atụrụ ukwuu ahụ ndụ site nꞌọnwụ
nye unu ihe ọma nile unu chọrọ, nke ga-enyere unu aka ime uche ya. Ka Chineke mejupụta nꞌime unu ihe ndị ahụ nile na-atọ ya ụtọ site na Jisọs Kraịst. Ka otuto dịrị Kraịst ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
Ezi ụmụnna m, ana m eme ka unu mata na nwanna anyị Timoti esitela nꞌụlọ mkpọrọ pụta. Mụ na ya ga-esoro bịa leta unu ma ọ bụrụ na ọ bịa nꞌebe a na mgbe na-adịghị anya.
Kelerenụ m ndị isi unu nile na ndị ọzọ bụ ndị kwere ekwe nọ nꞌebe ahụ. Ndị kwere ekwe si Itali na-ezitere unu ekele ha.
Ka amara Chineke dịnyere unu nile.
HIBRU 1 / HI 1
HIBRU 2 / HI 2
HIBRU 3 / HI 3
HIBRU 4 / HI 4
HIBRU 5 / HI 5
HIBRU 6 / HI 6
HIBRU 7 / HI 7
HIBRU 8 / HI 8
HIBRU 9 / HI 9
HIBRU 10 / HI 10
HIBRU 11 / HI 11
HIBRU 12 / HI 12
HIBRU 13 / HI 13